လှကျော်ဇော ● (၁၈) ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာ ကွန်မြူနစ်ပါတီများနှင့် အလုပ်သမားပါတီများရဲ့အစည်းအဝေး | MoeMaKa Burmese News & Media
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ( ၂၈ ရက် – ၃ဝရက်နေ့အထိ) ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမှာ (၁၈) ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာ ကွန် မြူနစ်ပါတီများနှင့် အလုပ်သမားပါတီများရဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးရဲ့ကြွေးကြော်သံကတော့ အရင်း ရှင်စနစ် အကြပ်အတည်းနဲ့ နယ်ချဲ့စနစ်ရဲ့ထိုးစစ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အလုပ်သမား ပြည်သူလူထုအခွင့်အရေးများနှင့် ဆိုရှယ် လစ်စနစ်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီများနဲ့ အလုပ်သမားပါတီများရဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာနဲ့ နည်းပရိယာယ်များတဲ့။ ဒီအဖွဲ့ကြီးမှာ ၈၅ နိုင်ငံက ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ အလုပ်သမားပါတီ ၁၂ဝ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအစည်းအဝေးကြီးမှာ လက်ရှိကမ္ဘာ အခြေအနေ အထူးသဖြင့် အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့ဘက်စုံအကြပ်အတည်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြပြီး ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းများအထူးသဖြင့် ပါတီအသီးသီးရဲ့ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်းက အတွေ့အကြုံများကို ဖလှယ်ကြ၊ မျှဝေကြ၊ အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်း တွေပေးကြနဲ့ နောက်ဆုံး ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကြေညာချက်များလည်း ထုတ်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကွန်မြူနစ် လှုပ်ရှားမှုကြီးအတွက်တော့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ အားပေးမှုကြီးတရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ တရုတ်ပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က မိန့်ခွန်းပြောရာမှာ သူ့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေ၊ ရရှိချက်တွေ၊ ရှုံး နိမ့်မှုတွေအပေါ် နိဂုံးချုပ်ချက်တွေ၊ သင်ခန်းစာတွေအပြင်၊ နိုင်ငံတကာရှိကွန်မြူနစ်များရဲ့ မာက်စ်ဝါဒအပေါ်ကြည့်မြင်နည်း တွေ၊ လက်ရှိကမ္ဘာ့အခြေအနေပေါ်သုံးသပ်ချက်တွေ စတဲ့ သဘောတရားအသစ်အဆန်းတွေ (တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ) ပါဝင် ပါတယ်။
မိန့်ခွန်းရဲ့အဖွင့်မှာ ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးကြီးများဟာ ကမ္ဘာတဝှမ်းတိုးတက်တဲ့ အင်အားစုများအကြား အပြန် အလှန် ဆက်ဆံနိုင် ဖလှယ်နိုင်တဲ့ သြဇာအရှိန်အဝါကြီးမားတဲ့ စင်မြင့်တရပ်ဖြစ်လာနေပြီး၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့ အရှေ့ဥရောပ ရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ဆုံးရှုံးမှုများနဲ့ အပြောင်းအလဲများအပြီး ကမ္ဘာကွန်မြူနစ်လှုပ်ရှားမှုရဲ့ တွန်းအားတရပ်ဖြစ်လာနေပါတယ် … တဲ့။
၃။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် တံခါးဖွင့်ပေါ်လစီကို ဖေါ်ထုတ်လုပ်ဆောင်ခြင်း ….တဲ့။
(ခ) တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်က တရုတ်ပြည်သူများရရှိတဲ့အောင်ပွဲများကတော့ ….
၃။ အနှစ် (၆ဝ) ကျော်သက်တမ်းရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ တရုတ်ပြည်သစ်အတွက် တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးမှာ ထင်ရှားတဲ့အောင်မြင်မှုများရစေပြီး၊ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံကို အလွန်တိုတောင်းလှတဲ့ နှစ် (၃ဝ) ကျော်လေးအတွင်း ဆင်းရဲတွင်းက လွတ်စေကာ စီးပွားရေးအရ ကမ္ဘာ့ဒုတိယအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာစေခြင်းဖြင့် လူသားသမိုင်းအတွင်း အံဘွယ်ဖြစ်ရပ်တ ရပ်ပေါ်ထွက်စေခဲ့ပါတယ် ….တဲ့။
(ဂ) ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်များ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကတော့ ….
“မာက်စ်ရဲ့ ပြဿနာများအပေါ်ကြည့်မြင်နည်းဟာ မူဝါဒသက်သက် (Doctrine) မဟုတ်ဘဲ နည်းနာ (Method) တရပ်သာ ဖြစ်တယ်။ အဆင်သင့်ဖေါ်စပ်ပြီးသားသဘောတရားပေးထားတာမဟုတ်ဘဲ၊ ဆက်လက်သုတေသနပြုဖို့ အချက်အလက်များ နဲ့ နည်းနာများကိုသာ ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်” ….တဲ့။
ဒါကြောင့်ပဲ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအနေနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေသစ်တွေ၊ ပြဿနာအသစ်တွေအပြင်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအဆင့်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့သဘောတရားအသစ်တွေ၊ လက်တွေ့နည်းနာသစ်တွေကို အဆက်မပြတ်တီထွင်ဖန်တီးလုပ် ဆောင်နေရပါတယ် … တဲ့။
၆။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ရှေ့ရည်မှန်းချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောသွားတာတွေကတော့ …
၁။ ၁၉၇ဝ ခုနှစ်များမှာ တရုတ်ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးဟာ ပြိုလဲမတတ်ဖြစ်နေပြီး အနောက်တိုင်းအရင်းရှင်စီးပွားရေးများနဲ့ ကွာဟမှုဟာ အလွန်ကြီးမားနေပါတယ်။ တို့တတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမလုပ်ရင်တော့၊ တို့ရဲ့ဆိုရှယ်လစ်အရေးတော်ပုံကြီးဟာ အရှုံးနဲ့အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ် …. လို့ တိန်ရှောင်ဖင်က ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီပေါ်လစီဟာ သမိုင်းရဲ့အချိန်ကာလရဲ့ ပြည် သူလူထုရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီဟာ ပြည်သူလူထုကို ညီညွတ်စည်းလုံးစေပြီး ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အရေး တော်ပုံကြီးကိုခေါင်းဆောင်ကာ လူထုရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုများကို အားပေးကာ၊ လူမှုကုန်ထုတ်လုပ်ရေးများကို အကြီးအကျယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခဲ့ပါတယ်။
၂။ အနှစ် (၃ဝ) ကျော်စီးပွားရေး အလျင်အမြန်တိုးတက်မှုအတွင်း ….
– တရုတ်ပြည်ဟာ စီးပွားရေးပြိုလုလုအခြေအနေကနေ ကမ္ဘာစီးပွားရေးရဲ့ ယန္တရားကြီးဖြစ်လာတယ်။
– လူထုကြီးတရပ်လုံးရဲ့နေထိုင်စားသောက်ရေးများ တိုးတက်လာပြီး အတန်အသင့် ချောင်လည်လာကြတယ်။
– ဘက်အသီးသီးမှာ လူမှုရေးတရားမျှတမှုကို လူထုတရပ်လုံး သိသာစွာရရှိလာကြတယ်။
– တရုတ်ပြည်ရဲ့ အမျိုးသားအင်အားတရပ်လုံးတိုးမြင့်လာတဲ့အတွက် တရုတ်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်အတွက်လည်း အင်သစ်အား သစ်တွေဖြစ်စေပါတယ်။
တကယ်တော့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ မာက်နဲ့အိန်ဂျယ်တို့ရဲ့ဖေါ်ပြချက်များကလည်း အရင်းရှင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဥပဒေသများနဲ့ ပစ္စည်းမဲ့တော်လှန်ရေးများအပေါ် လေ့လာချက်များအပေါ်အခြေခံ ပါတယ်။ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အဖြေအတိအကျမရှိပါဘူး။ တိန်ရှောင်ဖင်က … ဆင်းရဲခြင်းဟာ ဆိုရှယ်လစ်စနစ် မဟုတ်။ အရင်းရှင်စနစ်အတွင်းက ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားများကို မြန်မြန်နဲ့ များများ ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းဖြင့် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ရဲ့အားသာချက်ကိုပြသနိုင်တယ် …လို့ ဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။
– ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့တံခါးဖွင့်ပေါ်လစီရဲ့တခြားထူးခြားချက်များကတော့ တရုတ်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ရဲ့လမ်းကြောင်း၊ သ ဘောတရားနဲ့ စနစ်များကိုတည်ထောင်ပေးပြီး တရုတ်ပြည်သူတွေကို ပိုမိုချမ်းသာပြီး အင်အားတောင့်တင်းစေခဲ့ပါတယ်။
– တရုတ်ပြည်ဟာမှန်ကန်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ တံခါးဖွင့်ပေါ်လစီကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးမှာသာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းတဲ့ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးများကို ဘက်စုံကလုပ်မယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင်နယ်ပယ်ပေါင်းစုံကအဆောက်အအုံအဖွဲ့အစည်းများကိုပြည့်ဝရင့်ကျက်စေမယ်။ ပြည်သူတွေဘဝကို မြှင့်တင်ပေးသွားမယ် … တဲ့။
ဒါတွေကတော့ တရုတ်ပြည်တွင်းအခြေအနေများကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအခြေအနေများနဲ့ ပတ်သက်လို့က တော့ ….
အရင်းရှင်ကမ္ဘာက အကြပ်အတည်းများဟာ ဆိုရှယ်လစ်အင်အားစုများအတွက် အခွင့်ကောင်းတွေလား။ ကွန်မြူနစ်တွေက ဒီအကြပ်အတည်းတွေကို ဆိုရှယ်လစ်အရေးတော်ပုံအတွက် အခွင့်ကောင်းတွေအဖြစ် ဘယ်လိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မလဲ။ ဒါ တွေကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ …. တဲ့။
ဒီပိုးလမ်းမ စီမံကိန်းကြီးဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်များရဲ့ကမ္ဘာနဲ့ လူသားသမိုင်းရဲ့အနာဂါတ်အပေါ်ကြည့်မြင်နည်ကိုထင်ဟပ် ပါ တယ်။ ကမ္ဘာစီးပွားရေး တြိဂံ သုံးပွင့်ဆိုင်စက်ဝိုင်းဖြစ်တဲ့ ….
၃။ သယံဇာတပေါကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံများကကုန်ကြမ်း …တွေဟာ ကျိုးပြတ်နေပါတယ်။ အလွန်နက်ရှိုင်းတဲ့ ထိန်းညှိမှုများလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာစီးပွားရေးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံသစ်များ၊ တွန်းအားသစ်များ၊ ဒေသဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုပုံစံသစ်များ စတာတွေ လိုအပ်နေပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်မှာ ကွန်မြူနစ်ပါတီများနဲ့ အလုပ်သမားပါတီများအားလုံးအတွက် အကြံပေးချက်များကတော့ ….
နောက်ဆုံး အဆုံးသတ်မှာတော့ ဒီအစည်အဝေးကြီးမှာတက်ရောက်လာသူများဟာ နေရာအသီးသီးက ကမ္ဘာဆိုရှယ်လစ် စနစ်ကြီးဆိုတဲ့ အိမ်ထောင်စုကြီးရဲ့ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မများဖြစ်တာကြောင့် တူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ တူညီတဲ့လမ်းကို လျှောက် လှမ်းနေကြတာပါ။ အတူတကွလက်တွဲပြီး တဦးကို တဦး အားဖြည့်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကွန်မြူနစ်စနစ်ဆီသို့ ချီတက်ရာလမ်းကို ဘယ်အင်အားမှတားဆီးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာဆိုရှယ်လစ်လှုပ်ရှားမှုကြီးဟာ မုချဘဲရှည်လျားလှတဲ့”ဆောင်းရာသီကြမ်းကြီး” ကိုကျော်နင်းနိုင်ပြီး ကျက်သရေရှိလှတဲ့ နွေဦးကာလကိုရောက်လာမှာပါ …တဲ့။